Android ကိုအသုံးချရန်အတွက် application များသည်အမှန်တကယ်လိုအပ်ပါသလား။ | Androidsis
Android အတွက်အသုံးချဆော့ဝဲလ်များအရ ၀ န်ဆောင်မှုပေးသည်ဟုယူဆရသောကိရိယာများစွာရှိသည် Android ကိုပိုကောင်းအောင်လုပ်ခြင်းနှင့်ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးမိုဘိုင်း operating system ကိုပိုမိုထိရောက်စေခြင်း။ ဒါပေမယ့်ဒီ application တွေမှာဘာတွေများရှိသလဲ။ သူတို့က Android Terminal ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်အတွက်တကယ်ထိရောက်ပြီးလိုအပ်လား။
နောက်ပြီးသင့်အားဒီ applications များနှင့်ပတ်သက်ပြီးကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအမြင်ကိုရှင်းပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ဝိသေသလက္ခဏာများနှင့်လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းများအနက်အနည်းဆုံး mid-range နှင့် high-end terminals များသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ terminals များမှပိုမိုကောင်းမွန်သောစွမ်းဆောင်ရည်ရရှိရန် Android ကိုပိုကောင်းအောင်ပြုလုပ်ပေးမည်ဟုကတိပေးသည်။ ၄ င်းတို့သည်နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာအသေးစိတ်အချက်အလက်များပါ ၀ င်သည့်လက်ပ်တော့ပ်များဖြစ်သည်။
အဓိကအားဖြင့်ဤအမျိုးအစားများတွင် o Android ကိုပိုကောင်းအောင်လုပ်မယ်လို့ကတိပေးတဲ့ကိရိယာတွေ အများကြီးပိုမြန်, အရည်သို့မဟုတ်ပင်အများကြီးပိုလုံခြုံစစ်ဆင်ရေးအဘို့, ငါတို့များသောအားဖြင့်ကြီးမားသောအုပ်စုနှစ်စုကိုရှာပါ။ ဤအရာ၏ပထမ ဦး ဆုံးဖုန်းခေါ်နိုင်ပါတယ် applications များသန့်ရှင်းရေး o အက်ပ်များကိုရှင်းလင်းခြင်းများသောအားဖြင့်ထိုကဲ့သို့သောကိရိယာများစွာဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားခြင်းဖြစ်သည် RAM နေရာလွတ်, cache သန့်စင် သို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်တို့၏ Android စက်များ၏အတွင်းမှတ်ဉာဏ်တွင်မည်သည့်ဖိုင်များ ၀ င်ရောက်နေသည်ကိုသိရှိရန်ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်များကိုအလေးချိန်ဖြင့်ဖိုင်တွဲပါ။
ဤအပလီကေးရှင်းကိုခေါ် "သန့်ရှင်းရေးသမား", ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရငါ့အဘို့သူတို့တစ်တွေဖြစ်ကြသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ Android terminal အတွက်လိမ်လည်မှုနှင့်အတားအဆီးများကိုရှင်းလင်းပေးသည်။ ပထမ ဦး ဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင် Android operating system ဟာသူ့ရဲ့အတွင်းပိုင်းပါ ချိန်ညှိချက်များ / အပလီကေးရှင်းများ သူတို့မှာရှိပြီးသားကိရိယာတွေရှိတယ် cache memory ကိုရှင်းတယ် သူတို့လုပ်သမျှအားလုံးသည်ပြင်ပကိရိယာများမလိုအပ်ဘဲဖြန့်ချိခြင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ Androids ၏အတွင်းမှတ်ဉာဏ်ကိုအသုံးမကျသောအသုံးချပရိုဂရမ်များဖြင့်ဖြည့်စွက်ခြင်းဖြစ်သည်။
လက်ဖြင့်သန့်ရှင်းရေးလုပ်ရန်၊ ပြင်ရန်သုံးရန်ပြင်ပကိရိယာများသုံးရန်မသုံးရန် RAM မှတ်ဉာဏ်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ မင်းကိုစကားစုတစ်ခုလောက်ပြောပြမယ်။RAM ကိုသုံးရမယ် and Android သည်အထူးသဖြင့်ဗားရှင်း ၄.၀ မှ စ၍ RAM မှတ်ဉာဏ်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ operating system ကိုစီမံခန့်ခွဲသောအခါ RAM နှင့် system အရင်းအမြစ်များပိုမိုလိုအပ်သောအခါကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုခြင်းကိုရပ်တန့်ထားသောအသုံးချပရိုဂရမ်များကိုအလိုအလျှောက်စီမံခန့်ခွဲရန်လုံလောက်သည်။.
ကျွန်ုပ်တို့နောက်ခံတွင်အပလီကေးရှင်းများစွာဖွင့်ထားသည့်အခါ၊ ၎င်းအချိန်သည်လေးလံသည်ဟုယူဆသောဂိမ်းတစ်ခုသို့မဟုတ်အက်ပလီကေးရှင်းကိုကြိုးစားရန်ကြိုးစားသောအခါ၎င်းကိုသက်သေပြနိုင်သည်။ Android operating system သည်ကျွန်ုပ်တို့နောက်ခံတွင်ရှိနေသော application များအားပိတ်နိုင်သည်, အထက်ဖော်ပြပါလျှောက်လွှာသို့မဟုတ်ဂိမ်း၏ကွပ်မျက်ဖို့ ဦး စားပေးပေးရန်။ သင်အကြိုက်ဆုံးဂိမ်းတစ်ခုမှထွက်ခွာသောအခါကျွန်ုပ်တို့၏ Android terminal ၏ RAM မှတ်ဉာဏ်သည်ဤ RAM မှတ်ဉာဏ်သန့်ရှင်းရေးကိရိယာတစ်ခုမှတစ်ခုကိုအသုံးပြုခဲ့သည့်အလားလုံးဝအခမဲ့ဖြစ်ကြောင်းကျွန်ုပ်တို့တွေ့ရှိခဲ့ဖူးပါသလား။
ဤအရာများနှင့်ကျွန်ုပ်တို့ရရှိသောတစ်ခုတည်းသောအရာ RAM ကိုသော့ဖွင့်ခြင်းသို့မဟုတ်သန့်ရှင်းရေးလုပ်ခြင်းသည်ဘက်ထရီပိုမိုများပြားစေသည်RAM တွင်သိမ်းဆည်းထားသော application များကိုဖယ်ရှားသည့်အခါ operating system သည်အပိုအရင်းအမြစ်များအသုံးစရိတ်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ Android terminal ၏ဘက်ထရီကိုအကြီးအကျယ်စီးဆင်းစေခြင်းဖြင့်၎င်းတို့ကိုလုံးဝပြန်လည်ဖွင့်ရန်လိုအပ်သည်။
မသေချာမရေရာအမည်ရှိ applications များ၏အမျိုးအစားနှင့်ပတ်သက်။ android အတွက်ဗိုင်းရပ်စ်နှိမ်နင်းရေး၊ သူတို့ထဲကအများစုဟာအစုလိုက်အပြုံလိုက် (သို့) လိမ်လည်မှုဖြစ်ပြီးသုံးစွဲသူကိုသူတို့လုပ်တာတခုတည်းဖြစ်သည် ဒါခေါ်ရလဒ်များအရအိပ်ယာအကျိုးသက်ရောက်မှုဒါမှမဟုတ်အတူတူပဲ၊ သူတို့ကကျွန်တော်တို့ကိုအန္တရာယ်ရှိနိုင်ပြီးမရေရာတဲ့လုံခြုံမှုကိုပေးပါတယ်။
ထိုအခါကျွန်ုပ်တို့၏ Android ကိုကာကွယ်ရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသော application များဖြစ်သည့်ဗိုင်းရပ်စ်နှိမ်နင်းရေးပရိုဂရမ်များရှိသည်။ ကျွန်ုပ်သည်၎င်းတို့အားအနည်းဆုံးဖြစ်ကြောင်းပြောခဲ့ပြီးဖြစ်သော်လည်း သူတို့ကအရမ်းစိမ်းနေတယ်၊ သူတို့သည်သင့်ကိုမစွန့်ပစ်မည်အကြောင်း၊ application တစ်ခုကို APK format ဖြင့် install လုပ်ပါ အများဆုံးကိစ္စများတွင်,ကန်အမှန်ဖြစ်သောကြောင့် သူတို့ကအဲဒါကို Trojan တစ်ခု (သို့) ဗိုင်းရပ်စ်အဖြစ်တွေ့လိမ့်မယ်.
၏ဖြစ်ရပ်အတွက် Android အတွက်ဗိုင်းရပ်စ်နှိမ်နင်းရေးအတွက်မလိုအပ်ပါဘူး Android operating system ကိုခြိမ်းခြောက်နေသောအမျိုးမျိုးသောခြိမ်းခြောက်မှုများမှကာကွယ်ရန်သာမန်အသိဥာဏ်နည်းစည်းမျဉ်းများကိုလိုက်နာရန်လုံလောက်သည်။ ဤအချက်များတွင်ကျွန်ုပ်တို့အကျဉ်းချုံးနိုင်သည့်အချို့သောဘေးကင်းလုံခြုံရေးစည်းမျဉ်းများ -
ကြိုးစား တရားဝင် Android အက်ပလီကေးရှင်းမှအက်ပလီကေးရှင်းများကိုသာဒေါင်းလုပ်ချနိုင်သည်။ ငါဆိုလိုတာက Google Play စတိုး။
Android Market သို့အပလီကေးရှင်းကိုတပ်ဆင်ခြင်းအတွက်ကျွန်ုပ်တို့ download လုပ်သောဆိုက်နှင့်အရင်းအမြစ်လုံခြုံမှုရှိမရှိအမြဲသေချာပါစေ။
ကျွန်ုပ်တို့၏ Android ဖြင့်ညစ်ညမ်းသောညစ်ညမ်းသောဝက်ဘ်ဆိုက်များကိုမကြည့်ပါနှင့် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ terminal ကိုမှခြိမ်းခြောက်မှုအများစုကိုတွေ့ရှိရသည်ဘယ်မှာကြောင်းကတည်းက။
applications များကကျွန်ုပ်တို့အားမေးသောခွင့်ပြုချက်များကိုအမြဲတမ်းကြည့်ပါ Play Store သို့မဟုတ် Amazon Apps ကဲ့သို့သောတရားဝင်စတိုးဆိုင်များမှကျွန်ုပ်တို့ဒေါင်းလုပ် လုပ်၍ တပ်ဆင်သောအရာများပင်လျှင် Android ကို install လုပ်လိမ့်မည်။
ယုံကြည်ရသော Wi-Fi ကွန်ယက်များသို့ဆက်သွယ်ပါ။
ကျွန်ုပ်တို့၏ Android ကိုခေါ်ဆိုမှုဆိုင်များ၊ အများပြည်သူစာကြည့်တိုက်များစသဖြင့်မရင်းနှီးသောကွန်ပျူတာများနှင့်မချိတ်ပါနှင့်။
USB debugging ပိတ်ထားပါ ကျွန်ုပ်တို့တကယ်လိုအပ်သည့်အချိန်တွင်၎င်းကိုသာသက်ဝင်လှုပ်ရှားစေပါ။
မင်းတွေ့တဲ့အတိုင်းငါဒီမှာဖော်ပြထားတဲ့စံနှုန်းတွေ၊ စည်းမျဉ်းတွေရှိတယ် စင်ဘုံသဘောမျိုး၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေသင်၏အိမ်သော့ကိုသူစိမ်းတစ် ဦး ထံမထားခဲ့ပါနှင့်သို့မဟုတ်မည်သည့်နေရာတွင်မဆိုထားခဲ့သကဲ့သို့သင်၏ Android ကိုလုံခြုံစွာအသုံးပြုရန်အတွက်စည်းမျဉ်းများသည်သင်၏နေ့စဉ်ဘဝကိုထိန်းချုပ်သောနည်းတူရိုးရှင်းပါသည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » လဲ tutorial » လုံခွုံရေး » Android ကိုအသုံးချရန်အပလီကေးရှင်းများသည်သူတို့တကယ်လိုအပ်ပါသလား။
ဒီတစ်ကြိမ်မှာကျွန်တော်နှင့်လုံးဝသဘောမတူညီ၊ ပထမ၊ အမြင့်သို့မဟုတ်အလတ်စားအကွာအဝေးတွင် Gb ram2(သို့) ထိုထက်ပိုသော၎င်းကိုကိုင်တွယ်ရန်အလွန်လွယ်ကူသည်၊ 512 mb ram နှင့်နိမ့်သောအကွာအဝေးတွင် operating system သည် mb 300 mb ထက်ပိုသည်။ ဟုတ်တယ်၊ ဟုတ်တယ်၊ မှတ်ဉာဏ်ကောင်းအောင်လုပ်ထားတယ်၊ ငါမှာ Huawei g510 ရှိတယ်၊ Seeder ကို install မလုပ်မချင်းဖုန်းသုံးလို့ရလာတယ်။
JC Melgarejo သင်ပြောသောစကားသည်မှန်ကန်သည်၊ အကယ်၍ သင့်တွင်အနိမ့်ကျသောပမာဏ 512 mb ရှိလျှင်သင် memory ကိုထိန်းချုပ်ရန်လိုသည်၊ မလိုအပ်သည်၊ antivirus သည်မည်သို့မည်ပုံ PC ၏နာမည်ကြီးတံဆိပ်များရှိသည်။ android အတွက်ကောင်းမွန်သောမူကွဲများရှိသည်၊ အချို့သည်အခြားသူများထက်ပိုမိုပေါ့ပါးသည်၊ သို့သော်၎င်းတို့သည်လိုအပ်သည်၊ သူတို့မထိခိုက်ပါ၊
ငါထင်တာကတော့ဗိုင်းရပ်စ်နှိမ်နင်းရေးဟာအားလုံးလိုလိုမဟုတ်ဘူး၊ မှတ်ဥာဏ်ကောင်းအောင်လုပ်တယ်။ ဥပမာ၊ ငါ့မှာ moto g ရှိတယ်။ ငါသန့်ရှင်းတဲ့မာစတာကိုသုံးတယ်၊ ငါ playstore ကနေဂိမ်းတစ်ခုတပ်ဆင်နေတယ်၊ ကျွန်ုပ်မဖျက်နိုင်၊ မသုံးနိုင်သောနေရာကိုယူပြီးပြန်ဒေါင်းလုပ်ဆွဲလိုက်သည်နှင့်နေရာပြန်ယူလာသည်။ ၎င်းသည်ဒေါင်းလုပ်လုပ်ထားသောအရာကိုအသိအမှတ်မပြုပါ။ သန့်ရှင်းသောမာစတာနှင့်သန့်ရှင်းသောဆေးကိုကျွန်ုပ်အသုံးပြုသောအချိန်၌ရှိသည်။ ပြီးတော့ဗိုင်းရပ်စ်နှိမ်နင်းရေးအတွက်၊ အန္တရာယ်အရှိဆုံးအက်ပလီကေးရှင်းတွေ (android ကိုအကြီးအကျယ်တည်းဖြတ်နိုင်တဲ့အတွက်) နဲ့သိမ်းထားတဲ့အလားအလာရှိတဲ့ဗိုင်းရပ်စ်ဖိုင်တွေကိုရှာဖွေတွေ့ရှိလို့အလုပ်လုပ်နိုင်ရင်၊ အဲဒါတွေကိုဖယ်ရှားပစ်ဖို့ (သို့) ထွက်သွားဖို့ရွေးစရာကိုငါပေးထားတယ်။ ဥပမာ - cmar လုံခြုံရေးရှိသည့် core တစ်ခုတွင် framaroot ကိုကျွန်ုပ်ရှာဖွေတွေ့ရှိသည်
Nahuel Gomez Castro အားပြန်ပြောပါ
ငါဆောင်းပါးနှင့်အတူသဘောမတူပါဘူး ကျွန်ုပ်ဖုန်းသည် 3Gb RAM နှင့် android 1 ရှိသည့် stock ROM ပါသည့်အခမဲ့ Samsung Galaxy s4.3 ဖြစ်ပြီးကျွန်ုပ်ကဲ့သို့သောအချို့ကိစ္စများတွင်ကျွန်ုပ်ကဲ့သို့ကောင်းသောသန့်ရှင်းရေး app ကိုတွေ့မြင်ရသည်။ ဂိမ်းကစားခြင်းသည်အလွန်များပြားသည်။ Real Racing3တွင်ကြည့်ရှုသည့်တိကျသော circuit တစ်ခုရှိသည် (Circuit 24 heures - Le Mans) ကိုကြည့်။ RAM များစွာဆွဲယူသည်။ ကျွန်ုပ်သည်အချက်အလက်အားလုံးကိုပြင်ပအက်ပ်တစ်ခုနှင့်အတူဖြန့်ချိရမည် အနည်းဆုံး 29MB RAM အခမဲ့ရှိလျှင်ကျွန်ုပ်သည်ထို circuit ကိုသာ run နိုင်သည်။ "တရားဝင်" ဒီ terminal အတွက် updates အသစ်တွေမရှိတော့တဲ့အတွက် kitkat လိုအခြား android version တစ်ခုဖြစ်တဲ့ RAM memory manager ကပိုကောင်းမယ်၊ ငါမသိဘူး။ ငါမသိတဲ့အပြင်ပြင်ပ app မရှိဘူးဆိုရင်ငါလုပ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ အချို့ပြိုင်ပွဲများကိုမကစားပါနှင့်၊ ဥပမာအားဖြင့်၊ ဂိမ်းသို့မဟုတ်အက်ပလီကေးရှင်းသည်ကျွန်ုပ်အားရပ်တန့်စေပြီး၊ တစ်ခါတစ်ရံတွင်သတင်းပို့ရန်ဖြစ်နိုင်ခြေမရှိဘဲ၊ ကျွန်ုပ်၏အဓိက desktop သို့ပြန်သွားသည်။ ငါလိုပဲငါဟာအထူးသဖြင့် RAM ကိုလွတ်မြောက်ဖို့ဒီအက်ပလီကေးရှင်းကိုတင်ဖို့အကြံပြုထားတဲ့ကိစ္စတွေပိုသိတယ်။
ခင်ဗျားနဲ့သဘောတူတယ်၊ ငါ့မှာ 1gb ram ram ရှိတယ်။ နာရီပေါင်းများစွာသုံးပြီးတဲ့နောက်မှာ၊ ငါ applications တော်တော်များများကိုဖွင့်လိုက်ပြီ၊ ဖုန်းကနည်းနည်း“ စတင်” သွားတယ်။ ငါသန့်ရှင်းတဲ့ Master တံမြက်စည်းကိုသူနဲ့ Voila ကိုလွှဲပြောင်းလိုက်တယ်။ !!! ဖုန်းသည်အရည်ချင်းရှိပြီးအမြဲတမ်းတုန့်ပြန်သည်။ ... အကယ်၍ အလွန်ကောင်းခဲ့လျှင်၎င်းအရာများဖြစ်ပျက်မည်မဟုတ်ပါက "အလွန်ကောင်းသော android memory memory" ကိုကျွန်ုပ်မဝယ်ပါ။
ရိုးရှင်းရှေးရှေး: အမြစ်, greenify, သန့်ရှင်းသောမာစတာနှင့် voila ။ ဖုန်းကပိုးကဲ့သို
MAN OF THE THE နာရီကိုပြန်ပြောပါ
Fredy Valeriano ဟုသူကပြောသည်
01 သို့သော်သင်သိသင့်သည်အတိုင်း၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်ယခင်ဗားရှင်းများမှရရှိသောသို့မဟုတ်ခလုပ်နှင့်မကိုက်ညီသောအကြောင်းပြချက်များကြောင့်သို့မဟုတ် google estore တွင်မရှိတော့သောကြောင့် third-party apk spindle များကိုအသုံးပြုသည်။ ထို့ကြောင့်ဗိုင်းရပ်စ်နှိမ်နင်းရေးသည်အရေးမကြီးဟုသင့်ကိုယ်သင်မပြောပါနှင့်
02 • Android စနစ်သည် ram memory ကိုထိန်းချုပ်နိုင်ပြီး application များကိုအလိုအလျောက်ပိတ်နိုင်သည်။ ၎င်းကိုကိုယ်တိုင်ပြုလုပ်ရန်လိုအပ်လျှင်ကြော်ငြာခြင်းကဲ့သို့ဤလုပ်ငန်းအတွက်ထိရောက်မှုမရှိပါ။ ထပ်မံဖွင့်လှစ်ထားသော application များကိုမပိတ်ရန်အတွက်၎င်းတို့ကိုသူတို့မပိတ်နိုင်အောင်မှတ်သားရုံသာရှိသည်
fredy valeriano သို့ပြန်သွားပါ
Cristian Avila ဟုသူကပြောသည်
အားလုံးမင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်သည် HTC One x Pucha ကိုအေးခဲစေမည့် Chrome ကိုဖွင့်တိုင်းတိုင်းမရေမတွက်နိုင်သောပို့စ်များကိုပြန်လည်သုံးသပ်ခဲ့သည်၊ ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၏ပြproblemနာကိုဖြေရှင်းရန်မှတ်ချက်အချို့ကိုတွေ့မြင်ခဲ့သည်မှာကြာရှည်စွာကျွန်ုပ်အတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်ရန်လိုအပ်သည်ဟုကျွန်ုပ်သဘောတူသော်လည်း သင်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပိတ်ထားသည်မှာ x နှစ်ပေါင်းများစွာအသုံးပြုခဲ့သည့်မှတ်ဉာဏ် RAM ပေါ်မူတည်သည်။ အက်ပလီကေးရှင်းများကိုပြန်လည်ဖွင့်လှစ်သည်။ ၎င်းသည်ကောင်းသောအကြံဖြစ်သည်မဟုတ်ပါ။ frabica မှလာသည်နှင့်ကျွန်ုပ်ဆဲလ်ပြန်မလာမချင်းကျွန်ုပ်ကြိုးစားခဲ့သည်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ application setCPU Root ... သန့်ရှင်းတဲ့ကုသနည်းကငါ့ဆဲလ်ကအရမ်းမြန်နေပြီ။ ငါကြည့်လိုက်ရင်မျက်နှာပြင်ကအေးခဲသွားမှာမဟုတ်ဘူး။ သင်လုပ်ရမှာကအကောင်းဆုံးကတော့ root ဖြစ်တယ်။ ဒါပေမယ့်သင်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်နိုင်သည် ကွာခြားချက်နှင့်သန့်ရှင်းသော Master ကိုတောင်အသုံးပြုရန်မလိုအပ်ပါ။ ဤအက်ပ်သည်လုပ်ငန်းခွင်တွင်းသတ်ဖြတ်ခြင်းကိုယ်တိုင်မဟုတ်ပါ။ ဆဲလ်ပရိုဆက်ဆာ၏အမြန်နှုန်းကိုမြှင့်တင်ပေးသည်၊ သင်သည်အချို့သော parameters များကိုပြုပြင်ပြီးသင်ခန်းစာအမြောက်အမြားရှိသည်။ အထူးသဖြင့်သင့်မှာ low-end ဆဲလ်တစ်ခုရှိရင်အကြံပေးလိုပါတယ်။ ကျွန်ုပ်၏ HTC …၎င်းသည်ကျွန်ုပ်အတွက်အလွန်ကောင်းမွန်သည်…
cristian avila သို့ပြန်သွားရန်
ဤအပလီကေးရှင်းအားလုံးသည် crap များဖြစ်သည်။ တစ်ခုတည်းသောအရာသည်အရင်းအမြစ်များကိုစားသုံးခြင်းနှင့်အင်တာနက်ကိုချိတ်ဆက်ခြင်းဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာသူတို့သည်သင်၏ဖုန်းကိုဆန့်ကျင်မှုထက်နှေးကွေးစွာထားခဲ့ပါသလောစပိုင်ဝဲများကဲ့သို့အလုပ်လုပ်ခြင်း
ငါစင်ကြယ်သောသခင်၊ မာစတာ UI စသည်တို့ကိုကြိုးစားပြီးကြိုးစားခဲ့သည်။ ဆဲလ်ဖုန်းသည် ၆၀% အထိအလွန်အမင်းအပူလွန်ကဲနေသောကြောင့်ဖန်သားပြင်သည်ပူဖောင်းများကိုပြုလုပ်ခဲ့ပြီး၎င်းသည် fart ဆဲလ်ကိုမဖြုန်းတီးခဲ့ပါ။ ငါသိတာကတော့ Avast ဟာသူကကိစ္စကိုအများကြီးဖြေရှင်းခဲ့ပြီးသူကဗိုင်းရပ်စ်နှိမ်နင်းရေးကိုသံသယဝင်နေတုန်းသူတို့သူလျှိုတွေပါ။
ကျွန်ုပ်၏ဆဲလ်ဖုန်း (သို့) မည်သည့်အက်ပလီကေးရှင်းကိုမဆိုအလုပ်လုပ်သည်အထိ Ami သည်အေးခဲသွားပြီးတစ်ခါတစ်ရံမြန်နှုန်းကိုမြှင့်တင်လိမ့်မည်။
ကောင်းပြီ၊ ငါအဲဒီမှာမြင်တွေ့ခဲ့ဖူးသူတွေထဲကငါကိုအနှစ်သက်ဆုံးနဲ့ငါ့ရဲ့မိုဘိုင်းနေရာကိုအကောင်းဆုံးအသုံးချနိုင်ဖို့အကောင်းဆုံးအလုပ်လုပ်ခဲ့တာတစ်ခုကငါမင်းကိုပြတော့မယ်။ ငါဒါကကူညီလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။